DEG DEG: Dagaal u dhaxeeya Ciidanka Puntland iyo Shabaab oo ka socda Duleedka Deegaanka Garmaal – STAR FM SOMALIA
DEG DEG: Dagaal u dhaxeeya Ciidanka Puntland iyo Shabaab oo ka socda Duleedka Deegaanka Garmaal
Wararka ka imaanaya Duleedka Deegaanka Garmaal oo ka tirsan Gobolka Nugaal, ayaa sheegaya in halkaasi uu ka socdo dagaal u dhaxeeya ciidamada Maamulka Puntland iyo Xoogagii ka tirsanaa Shabaab ee gaaray deeganadaasi.
Dagaalkaan ayaa yimid, kadib markii ciidamada Maamulka Puntland ay weerar abaabulan ku qaadeen ciidamada hubaysan ee agagaasi galay, waxaana taasi ay keentay in ciidanka hubaysan ay la dagaalamaan kuwa Puntland oo ay iska difaacaan.
Dagaalk xoogiisa wuxuu ka socda Deegaan lagu magacaabo Suut oo Qiyaastii 20-KM u jira Deegaanka Garmaal, ciidamada hubaysan ee Shabaabka ka tirsan ayaa ku sugan Garmaal, hayeeshe ciidan kale oo badan ayeey u direen deegaanka Suut oo dagaalka uu ka socdaa.
Saraakiisha ciidamada Maamulka Puntland weli kama aysan hadlin dagaalkaan xoogan ee ka socda Deegaanka Suut ee duleedka Deegaanka Garmaal ee Gobolka Nugaal.
Ciidamada kuwa loo yaqaan Argagixiso la dirirka Puntland ee PIS iyo ciidamada kuwa badda Puntland ayaa dagaalka qaaday iyaga oo aad u hubaysan.
Waxaa adag helida xogo ku saabsan halka ciidamada ay kala marayaan iyo Khasaaraha ka soo kala gaaray dagaalkaasi, maadaama dhulka lagu dagaalamayo dadkii shacabka ee ku sugnaa ay ka barakaceen.
Kenya oo sheegtay inay dishay 19 Shabaab ah, hubna ay gacanta ku dhigtay
Wararkii Ugu dambeeyay Dagaalyahandii Shabaab ee gaaray Deegaanada Maamulka Puntiland